Khuphela uguqulelo lwamva nje lwe-rom Elite ye-Samsung Galaxy S | I-Androidsis
Ukujonga impumelelo ye-rom endiyibeke kwithuba eladlulayo, Imania yeHTC elite, kwaye ukusukela iphelelwe lixesha kakhulu, Ndikuzisa Inguqulelo yamva nje efumanekayo kumsonto we-rom esele ikhankanyiwe.
Olu lolona hlobo lwangoku lwe yodumo i-Elite rom, eyona inabalandeli abaninzi kunye neyona ikhuphelayo kunye nabalandeli abazimiseleyo.
UKUQATSHELWA, I-ROM YE-ELITE JELLY BEAN ANDROID 4.1.1 APHA
Le rom iza kunyuka Isiseko se-Android IMM76L, ayinalo naluphi na uhlobo olongezelelweyo lokongezwa Ulawulo lweRom okanye efanayo; eyiphi elite isinika kule rom evusa inkanuko, kunjalo imbonakalo eluhlaza yesitokhwe rom, Ngayo yonke ukusebenza kwayo kunye ukusebenza okungaqhelekangazombini ubomi bebhetri nayo yonke enye into.
2 Izinto ezifuneka kuqala
3 Iifayile ezifunekayo:
Iifowuni ze-Galaxy SIII
I-Livewallpaper Galaxy SIII
ISuper SU entsha
Ukulungiswa kweLinaro GCC (ngokwe-XDA)
Izandi zeGalaxy SIII
Kufuneka sibenayo Isamsung ye-Samsung S ibangelwe kwaye kufakwe i-ClockworkMod RecoveryNgokufanayo, ngaphambi kokuqala ukufaka le rom, kufuneka sijonge loo nto Ibhetri yesixhobo sethu ihlawulisiwe ukuya kwi-100 x 100, Sikwajongile ukuba sinazo ukulungiswa kwe-usb kunikwe amandla kwimenyu yeseto.
Kucetyiswa ngentambo ngokwayo elite yenza ufakelo olucocekileyo lwe-rom, Oku kuyakukuphepha iingxaki ezininzi kunye nokungasebenzi rom.
Okokuqala siza kukhuphela ingxelo yamva nje ye-Elite rom kule khonkcoNje ukuba ifayile icinezelweyo ikhutshelwe, siya kuyikopa ngaphandle kokucinezela kwingcambu ye-sdcard, siya kucima isixhobo, kwaye Siza kuyivula kwakhona kodwa kwimo yokubuyisela ukuqhubeka nokufakwa kwe-rom:
Ukunyuka kunye nokugcinwa kunye nefomathi yokuqalisa, i-cache, idatha, idatha kunye nenkqubo.
Ngale nto uza kuba nayo I-rom yakutshanje evela kulo mpheki uphezulu we-HTC mania ifakwe kwifayile yakho ye- Samsung Galaxy S, sele ndilinde i-rom Imbotyi yejeli, ukusukela ngokutsho kwezimvo elite usebenza kwizibuko, Le yeyona roms intle kwaye izinzileyo kwisiphelo sethu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Rom Samsung Galaxy S Android 4.0.3 Elite 9.1 (ICS), I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo, I-Samsung Galaxy S, uyifaka njani i-Rom ngendlela ecocekileyo
Khuphela - Khuphela i-IMM76L RC 1.4.1
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, i-Rom Gnex Stock 1.4.1 i-Android 4.04 yi-Elite
Izicelo zicwangciswe ngokulandelelana kwealfabhethi okanye singazi-odola njengoko sifuna?
Ukuba ujonga kwiimpawu zerom, iza ne-Apex Launcher, ethetha ukuba iyakuvumela ukuba u-odole usetyenziso njengoko ufuna.
Kwaye kuthekani ngempazamo eboniswa libhetri?
Yeyiphi impazamo othetha ngayo?
Kwividiyo kuthiwa ibhetri yokufunda ayisebenzi kakuhle. «Apha ithi ndine-8% eseleyo, kodwa ayiyonyani. Ndikhe kwibhetri ngaphezulu kosuku »
Ndazibuza lonto nam.
UMartin Ferrarese sitsho
Nam ndiyazibuza into enye. Ndinomdla kakhulu kubomi bebhetri. Enkosi!
Phendula uMartín Ferrarese
Ngokusetyenziswa okuphakathi, malunga neeyure ezili-18, konke kuxhomekeke kwimeko yebhetri.
Ngamanye amaxesha kufuneka usule ibhetri.
Ngaba kunokwenzeka ukubeka i 'toggles' ze-wifi, ibluetooth njl njl kwi-bar yesaziso?
Ok kwividiyo iyaphuma ... kodwa abaphumi kuthotho .. bafumana njani?
Intloko ngaphaya komsonto we-Elite kwi-Htcmania kwaye ukhuphele iiToogles kwaye uzifake ekubuyiseleni emva koSula i-dalvik.
Ukuba ufake isicelo se-Elite ungayenza nge-OTA
Ewe, ukhuphela usetyenziso kwiVenkile yokudlala
Ngaba ndingafaka kwi-gt i9000b?
Andikhathali ngokwenene ngomabonwakude kuba andikaze ndiyisebenzise,
kodwa ngaba isifundo sonke siyasebenza kwimodeli yam?
Intloko ngaphaya kweli phepha kwaye ukhuphele uhlobo oluthile lwesiphelo sakho:
Hayi, le rom yey i9000
Ndifaka ukuqala kwakhona kwaye akuphumi kwiluphu ... ndenza ntoni!?
Oko kukuthi ekuqaleni kufakela iKernel kuphela, gcina ivolumu phezulu kwamandla ukuze ungene kwakhona kwaye ukhanyise i-rom ngaphandle kokusula okanye ukufomatha nantoni na.
Kwenzeka into efanayo kum, kodwa xa ndidibanisa amaqhosha amathathu ukungena kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, iqala ngesiqhelo kwaye iyaqhubeka neluphu. Imowudi yokukhuphela iyandivumela ndingene. Ndingenza ntoni ??
Zama kwakhona ukufaka ukubuyiswa ngamanye amaxesha kubiza kancinci
Enkosi uFrancisco. Ndizamile kaliwaka kwaye ayindivumeli ukuba ndingene kwimowudi yokubuyisela. Ekugqibeleni ndiye ndakwazi ukuyisombulula ngokufaka i-rooting kwakhona kwaye ndibuyisele kwakhona ukubuyisela kwi-odin, kwimowudi yokukhuphela. Ndiyayitsho ukuba kwenzeka into efanayo nakomnye umntu ...
Xa ukuqala kwakhona, inkumbulo ayisandiboni, indixelela ukuba ayinazifayile, ndingaqhubeka njani nokudanyaza?
Ukusuka ekuphulukweni kwakhona qhagamshela iselfowuni kwi-pc kwaye ufake iiMount kunye nokugcinwa, emazantsi ibeka intaba yokugcina i-usb, ngenisa kwaye i-sdcard izakuvela kwi-PC, ikope iifayile kunye nefilak rom kwakhona
Enkosi kakhulu ndikwazile ukuyifaka, ikhangeleka intle kakhulu, ngoku ingxaki, ngalo lonke ixesha undithumela umyalezo othi: "Ngelishwa, inkqubo ye-android.process.media ime" kunye neqhosha lokwamkela, kutheni le okanye Ndingayilungisa njani?
Enkosi kakhulu, ilungile, ngokubhekisele kwimpazamo, ndibuyisele umzi-mveliso kwaye ibingathi intsha, ngoku ndiyabhabha. oku kuhle, igumbi elihle kakhulu.
I-Donaldo TB sitsho
Molo ndineengxaki ngoku ngoqhagamshelo lweWi-Fi, ihlala "ekukhetheni idilesi ye-IP" kwaye ayinakuze idibane, oko kuhlala kusenzeka kum xa ndifaka ii-ics kwi-9000 yam..t
Phendula kwi-Donaldo TB
Ndiyifakile kwaye yonke into ilungile emva kokufaka usetyenziso lwam lweTitanium Buckap kunye nokuqalisa kwakhona iselfowuni ndinikwa isaziso sokuba isicelo esinegama elithi google.apps siyayeka kwaye yonke i-WhatsApp, Twitter, Google+, Isikhangeli ... ndiyikhuphile kwaye uzifake kuGoogle Play kodwa akukho nto iqhubekayo ukwenza okufanayo. Nceda undincede.
Kungenxa yokwahlulahlulwa kwedatha, khangela ibhlog yakho malunga nendlela yokulungisa iingxaki zendawo kunye nokuvalwa okunyanzelekileyo.
Yenziwe ngokufaka i-datafix kwi-recovery
Ngaba kunokwenzeka ukudibanisa ifowuni ne-pc ngokusebenzisa ii-kies ngale rom? Ndizamile kodwa andikwazi ...
Ngaphandle kwe-ICS rom uya kuba nakho ukunxibelelana neKies
ungoyena mbulelo mkhulu enkosi kakhulu usebenza ngokugqibeleleyo
isikere sika-donaldo sitsho
Molweni ndineengxaki ngoku ngoxhumano lweWi-Fi, ihlala "ekukhetheni idilesi ye-IP" kwaye ayinakuze idibane, oko kuhlala kusenzeka kum xa ndifaka ii-ics kwi-9000 yam..t
Phendula u-donaldo Tijera
Le rom ye-i9000, kungafuneka utshintshe imodem, kodwa andazi ukuba ndikuxelele ntoni, kuba i9000 yenye yeerom ezilungileyo ezikhoyo namhlanje
Isikere sikaDonaldo sitsho
Izixhobo zidibanisa ezinye iinethiwekhi ze-Wi-Fi kodwa ingezizo ezam, Ngoku nge-2.3.6 ukuba idityaniswa ne-Wi-Fi endlwini yam. Ndifunde khona into malunga nokutshintsha imodem kodwa andazi ukuba injani.
Phendula UDonaldo Tijera
faka olu hlaziyo kwaye yonke into ilungile. Ndiyayibiza kwaye ayifuni ukuyihlawulisa iphelelwe yirhafu kwaye ngoku ayivuli kwaye ayibizi into endinokuyenza akukho nto isebenza
Yintoni endiyenzayo? Inethiwekhi yeselfowuni ayifumaneki ibonakala kum, andikwazi ukufowunela, kwaye abandibizeli uncedo !!!
Ndihlala ndifumana umyalezo wokuba inkqubo ye-android.process.media imile
Enkosi kakhulu ngale rom intle, inyani kukuba yonke into isebenza ngokugqibeleleyo. Enkosi
Ngaba ungachaza kancinci ngokunzulu ukuba ungazongeza njani iitogs okanye apho ungafumana khona ulwazi lokongeza? Ndikhangele la msonto uthetha ngawo kwi-htcmania kodwa andafumana nto
Emva kokwenza onke amanyathelo ekugqibeleni ndinika inkqubo yokuqalisa kwakhona ngoku, kodwa ibuyela 'ekuqaleni (i-samsung galaxy s)' kwaye iyandibuyisela kwimodi yokubuyisela. NCEDA NCEDA !!
Faka le ROM kwaye isebenza ngokumangalisayo, ngokukhawuleza okukhulu. Eyona nto iphazamisayo endikhe ndanayo (kwaye ndicinga ukuba ingxaki ikwi-ICS kuba yenziwe ngee-ROMs ze-ICS) kukuba i-tango ayiyiboni ikhamera yangaphambili kwaye kum le nkqubo iphambili. Ukuba nabani na unesisombululo koku ndingaluvuyela uncedo lwakho. Ndiyabulela kwangoko
Emva kokufaka le rom yonke into ibintle kakhulu, kodwa emva kweeveki ezi-2 ndinengxaki nefriji yewijethi yefoto kunye nokuvalwa okungalindelekanga kwezinye izicelo, ndenze ifomathi (ukuseta kwakhona kumzi-mveliso) yaqhubeka ne-rom efanayo kodwa ayizizo zonke ezahlukileyo Ukungaphumeleli kwesibonisi sebhetri kubafowunelwa endingenakubabiza, isindululi esinegama leGerardo ethile…. kuye kwafuneka ndiyibuyisele ngaphakathi i-jvu rom ndiphinde ndiyifake
Ndizibekile iitogs, ndizikhuphele kwifolda ethi uhlaziyo, apho ndizikhuphele zona toggles t9 dialer ndicinga ukuba ibizwa ngale ndlela ndiyifaka kunye nexesha.
Ukubulisa. Ndiyenzile inkqubo kwaye ndikumjikelo wokuqalisa kwakhona. Kuba andinakungena kwakhona, ndasusa ibhetri okomzuzwana, emva koko ndavula ngokudityaniswa kwezitshixo kwaye ngeli xesha ndingene kwakhona. Ke ngaphandle kokwenza ukosula okanye nantoni na ndaya ngqo ukufaka i-rom kwaye ngeli xesha ukuba ndigqibe ngokwesiqhelo. Ukuqala kwakhona, ibonakalise imibala yayo kwaye emva komzuzu okanye ihlawulise ngesiqhelo.
Ndiyathemba ukuba iyamnceda umntu ukuba kwenzeke into efanayo. Oku akunakwenzeka!
Ngaba uyazi ukuba unokwenza njani abafowunelwa abagcinwe kwiSIM bavele?
Kwabafowunelwa, iqhosha lemenyu, oku kulandelayo kuyavela:
- Abafowunelwa abazoboniswa
Ukungenisa / ukuthumela ngaphandle, ukhetho lokuqala, ungenisa abafowunelwa kwikhadi leSIM
UJose Barragan sitsho
Ngaba iyasebenza kwimodeli ye-GT I9001?
Phendula ujose barragan
Molo! Ewe, ndiyikhuphele kwifayile kwikhonkco kwaye ndiyikhuphele kwifowuni yam njengoko kucacisiwe apha kodwa andazi ukufakela kwam emva kokulandela amanyathelo ngamanye ...
Kubonakala ngathi ifayile endiyikhupheleyo ayigqitywanga okanye yonakele kuba ayifaki kwaye ndibuyela kwigumbi lam langaphambili le-gingerbread 2.3.6
Ndiyibekile kunye ne-isamsung s kwaye yonke into ilungile ngaphandle kokuba ngelixa lokuma isikrini sijike ngokwaso ngokuqhubekekayo.Ukuba umntu unesisombululo, nceda usibhale phantsi.
UFrancisco… Capo di tutti cappi !!! Ndichithe ubusuku bonke ndifunda iiposti kunye neenkqubo zokuncothula i-Galaxy S GT l9000, ndiyifomathile (okanye nantoni na ebizwa ngayo) kwaye ufake i-rom eyahlukileyo kwinkunkuma eyizisileyo. Yinto endifuna ukuyenza ixesha elide, kuba ndiziva ndilibanjwa le-Samsung kunye nokuseta kwayo okungagungqiyo, ukungabinakwenzeka kokuhlaziya, ukuyenza ihambelane neMac, njl ... kodwa bendihlala ndisoyika kancinci ukuba Ndingadutyulwa ngempundu.
Okokugqibela izolo, ndiziqhatha kancinci ngeselula, kukho into engahambanga kakuhle (ndicinga ukuba ukuhanjiswa kwefayile ukusuka kwi-Mac ukuya kwi-Galaxy engavalanga kakuhle) kwaye kwiiyure ezimbalwa zokuba ndinenomyayi bendineplastic chunk nebhetri . Ke ngoku akusekho loyiko kodwa ukufuna isisombululo (ngekhe kwenzeke ngokuthenga enye iselfowuni) kunye nokukhangela inethiwekhi ndifumanise ukuba iiposti zakho zibalasele, zenziwe kakuhle, zicacisiwe, zicacile, zilula ... ukuba ngowokuqala Ngexesha ndifunda inqwaba yezithuba kunye neenkqubo, lixesha lokuqala endifunda into eyenziwe kakuhle, ebhaliweyo, ecacisiweyo, eyalelweyo, nazo zonke izixhumanisi zayo zisebenza… Ummangaliso !!!
Ngoku ndine «Rom Gnex Stock 1.4.1 Android 4.04 nguElite», ngaphandle koko kuye kwafuneka ndibeke iVirtualbox kwiMac, kunye nayo i-XP SP3, ndineOdin, njl.
Enkosi kakhulu, Francisco, ngomsebenzi omkhulu owenzayo.
Ndiza kulandela iiposti zakho ukusukela ngoku, kuba ndiyabona ngokucacileyo ukuba ndiza kufunda lukhulu.
Molo uFrancisco! Isifundo esihle kakhulu. Ndicinga ukuba ndilahlekelwe yi-3G kuba andikwazi ukuyenza naphi na. Into elungileyo esebenza nge-wifi. Ngaba uyazi ukuba kunokwenzeka ukuba ndilahlekelwe yingoma kanomathotholo okanye ibhendi yesiseko okanye enye into efanayo?
Enkosi kwaye molo, Alf
Ngenisa useto / iinethiwekhi zeselfowuni / i-APN kwaye uqwalasele i-APN entsha ehambelana nomnxibelelanisi wakho wenethiwekhi
Idatha kufuneka uyinikwe yinkampani ongene kuyo kwinkonzo
molo ndine-motorola xt912 kwaye ndifake i-4.2.2 rom, yonke into ilungile de ndizame ukumisela i-apn kuba ayindivumeli ndingene kwinethiwekhi yeselfowuni kwaye ndifumana impazamo ethi! ngelishwa inkqubo ye com.android.phone ime